Kuzosungulwa i-RAF Space Command, ezokwethulwa eScotland - Micro-Semiconductor.com
UNdunankulu umemezele ukusetshenziswa kwemali engango- $ 24.1bn, eminyakeni emi-4 ezayo, ekhuluma nezokuvikela nezokuphepha kuzwelonke.
Lokhu kufaka 'i-Space Command' entsha ezo "vikela izintshisekelo zase-UK emkhathini". Kuzobuye kube nesibopho sesethelayithi yokuqala yase-UK ezokwethulwa kusuka erokheni lase-UK.
Kwakukhona nokusungulwa kweNational Cyber ​​Force. Kuhloswe ukuthi lokhu "kuzophazamisa amaphekula, imisebenzi yombuso enobutha nezigebengu futhi kuguqule amakhono e-UK e-cyber," kusho uhulumeni. Ubambiswano loMnyango Wezokuvikela kanye ne-GCHQ, luzokwenza imisebenzi ye-cyber enesibopho kusukela ekuphikiseni amacebo okwethusa kuya ekusekeleni ukusebenza kwamasosha.
"Lesi sivumelwano seminyaka eminingi samukelekile kakhulu eMbuthweni Wezempi," kusho uMphathi Wezokuvikela, uGeneral Sir Nick Carter. "Ixhasa indlela eya esikhathini samanje kanye namandla edijithali esiwadingayo ngawo-2030s, ahlanganiswe kuzo zonke izizinda zasolwandle, umoya, umhlaba, i-cyber nesikhala."
“Kusivumela ukuthi sivumelane nesikhathi esiseduze ukunqanda uhla lwezinsongo eziyinkimbinkimbi esibhekene nazo. Kuqinisekisa ukuvikeleka kwezwe lethu, kunikeza umbono weGlobal Britain, futhi kuthumela umyalezo onamandla kubalingani bethu kanye nabaphikisi bethu. ”
UNobhala Wombuso waseScotland, u-Alister Jack, uphinde waqinisekisa ukuthi utshalomali lukaHulumeni wase-UK olungamaphawundi ayizigidi eziyi-103 esifundeni esiseningizimu-ntshonalanga yeScotland, wasayina isivumelwano sase-Ayrshire Growth Deal.
Njengoba uHulumeni waseScotland futhi etshale imali engu- $ 103 million, utshalomali oluphelele, kufaka phakathi uxhaso oluzimele, kulindeleke ukuthi lube cishe ngama- £ 250 million.
Kukhona amaphrojekthi ayisishiyagalombili abathintekayo, abandakanya ubuchwepheshe be-aerospace, ukuvuselelwa kabusha, ucwaningo kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha, ingqalasizinda kanye nesayensi yasolwandle. UHulumeni waseScotland uphinde utshale imali eyizigidi ezingama- £ 103 nabalingani bendawo abanikela ngokunye.
Isitatimende sikahulumeni sathi:
“Lesi sivumelwano sizobeka i-Ayrshire njengesinye sezikhungo ezihamba phambili e-UK zomsebenzi we-Aerospace ne-Space ngohlelo lwe-Aerospace and Space Programme oluvelele nolunoguquko. Lokhu kuzosekelwa yibo bobabili ohulumeni baseScotland nabase-UK, ngemali ephelele yohlelo lwe- £ 80 million. I- £ 32 million izotshalwa nguhulumeni wase-UK kanye ne- £ 30 million nguHulumeni waseScotland, bese kuthi amanye ama- £ 18 million aphume kuMkhandlu waseNingizimu Ayrshire. ”
U-Ian Annett, iPhini le-CEO le-UK Space Agency, ungeze wathi:
“Lesi sivumelwano sizoletha umfutho emkhakheni wezikhala okhulayo wase-UK ngokuxhasa ngezimali imisebenzi emisha, enqamula umkhumbi-mkhathi ezungeze isikhumulo sezindiza iGlasgow Prestwick, kubandakanya nokwakhiwa kwendawo yesikhala.
Lokhu ngeke kudale kuphela imisebenzi enamakhono aphezulu esifundeni sonke kodwa futhi kuzothuthukisa idumela lase-UK njengendawo ehamba phambili yaseYurophu futhi kusilethe isinyathelo esisodwa eduze nokwethulwa kwesathelayithi okuncane okwenzeka e-UK. "
IShetland Space Center
Ngenyanga edlule, uhulumeni wase-UK wagunyaza izinhlelo zikaLokheed Martin zokudlulisela imisebenzi yakhe emincane yokwethula isathelayithi eShetland Space Center. Ithemba ukuthi lokhu kuzoholela ekwakhiweni "kwamakhulu emisebenzi yasemkhathini" eScotland.
I-UK Space Agency (UKSA) ikholelwa ukuthi izinhlelo zenkampani zokuhambisa i-UK Pathfinder Launch yazo isendaweni yaseShetland, eLamba Ness ku-Unst (osesithombeni), zombili zizoletha inani lesikhathi eside futhi zisize ekusunguleni imakethe yokwethulwa okuqhubekayo njengengxenye uhlelo lwasemkhathini lwe-UK, olubizwa nge-LaunchUK.
IShetland Space Center ilindele ukuthi ngo-2024, indawo yesiphephelo ingase isekele ingqikithi yemisebenzi engama-605 eScotland kufaka phakathi i-140 yangakini kanye ne-210 esifundeni saseShetland esibanzi. Eminye imisebenzi engu-150 nayo izodaleka ngezinsizakalo ezibanzi zokukhiqiza nokweseka.